Archive du 20180709
Tolon’ny 13 mey Miroso amin’ny dingana manaraka
Hiova endrika ny tolon’ny fanovana notarihin’ny depiote TIM sy ireo avy amin’ny tsy miankina manomboka izao. Manomboka anio alatsinainy 9 jolay mantsy dia tsy eo amin’ny kianjan’ny 13 mey intsony ny hetsiky ny fanovana fa isaky ny minisitera indray.
Fampielezan-kevitra Mampiasa teny mampanonofy ny mpanao politika
Nivoaka ny tetiandrom-pifidianana. Efa mipoitra tsikelikely ireo mikasa hirotsaka ary hanao tohivakana ny fanambarana mandra-pahatonga ny tena fotoana.
Fampihavanam-pirenena Adino sy takon’ny fifidianana
Raha ny lafiny ara-bola sy ara-pitaovana, dia efa andrim-panjakana iray manana ny tetibolany mihitsy ny Filankevitra momba ny fampihavanana na ny CFM, ary mandray karama tsy tapaka ireo olona voafidy sy notendrena ho mpikambana ao anatin’io ka tsy tokony ho any amin’ireo lafiny ireo velively no sakana.
Madagasikara Afaka Hanangon-tsonia handavana ny fifidianana kitoatoa
Latsaka an-katerena tanteraka ny firenena ho an’ny vondron’ny tanora eo anivon’ny Madagasikara Afaka, tarihin’Andrianjakatiana Johny Paul.
Senatera Dr Benessy Harison Sebastien « Aleo hapetraka ny fitoniana hanomanana fifidianana »
Anisan’ny mpanao politika eto Toamasina miteny isaky ny misy zavatra tsy mety sy mpiara-miasa amin’ny olon-drehetra, ary mpanao asa soa ho an’i Toamasina amin’reo asa sosialy fanaon’ny fikambanana politika tarihany, “FIMAMI”, ny senatera Dr Benessy Harison Sebatien.
Sao dia manamaina marina aza ?
Mbola tena milamina marina ve aloha ianareo ao ry Jean a ? Sao dia manamaina marina ary le ?
Kardinaly Désiré Tsarahazana Ho avy rahampitso eto Madagasikara
Efa tsara homana ny fitsenan’ny vahoakan’i Toamasina sy ny mpino Katolika ny fahatongavan’ny kardinaly Tsarahaza Désiré handray ny birao fiasany izay hijanona ao Toamasina ny 13 jolay ho avy izao.
FJKM Anosipatrana Ivon’ny fankalazana ny faha-150 taona Mankalaza ny faha-150 taona niorenany ny
FJKM Anosipatrana ankehitriny. Tamin’ny sabotsy 8 jolay teo no nanomboka ny fankalazana nanasana ireo sinoda sy ny zanaka ampielezana ary nanomezana sakafo azy ireo.
Mondial 2018 Narodan'i Croatie ny nofinofin'i Russie
Nahintsan'i Croatie tamin'ny "tirs au but" 4-3 tamin'ny lalao ampahefa-dalana farany notontosaina ny sabotsy alina teo i Russie mpampiantrano rehefa nisaraka ady sahala 2-2 ny roa tonta taorian'ny fanalavam-potoana.
Rugby teny amin’ny kianjan’i Makis Rava tsy lera ny fihaonan’ny Asa st XV Avenir
Raha nizotra antsakany sy andavany ireo lalao rehetra nokarakarain’Atsimondrano sy « Comité Technique Tanà-Ville »
« Telma Coupe de Madagascar 2018 » Misongadina ireo ekipa vaventy
Nahazoam-bokatra ny ampahany vitsivitsy tamin’ny 1/16-ndalan’ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara na ny Telma Coupe de Madagascar 2018. Nisongadina tamin’ireo vokatra azon’ny Tia Tanindrazana ny fisongadinan’ireo ekipa lehibe efa fanta-daza sy efa zatra mandray anjara amin’ity fifaninanana ity. Ireo vokatra azo :
« Revy degany »
Mafampana hatrany ny toe-draharaha politika eto amin’ny firenena na teo aza ny fitsanganan’ny governemanta, izay nambara fa handamina ny firenena sy hitondra an’i Madagasikara any amin’ny fifidianana mangarahara sy handraisan’ny rehetra anjara.
Taksibe tsy manara-dalàna Misy mandroaka mpamily avy hatrany ireo koperativa
Tsy mety tapitra ny resa-be mikasika ny tsy fanarahan-dalàna ataon’ny taksibe tato ho ato. Voakasika manokana ny eto an-drenivohitra izay mihodina an-dalana ny ankamaroany fa tsy misy tonga any amin’ny toby fiantsonana.
Valanaretina pesta Mila mailo hatrany
Tonga nanome voninahitra ny fivoriana ny fanazavana ny valin’ny hetsika rehetra natao momba ny ady amin’ny pesta sy ny fanamafisana hatrany ny ady mbola atao amin’ny valanaretina, ny praiminisitra Ntsay Christian.
Salon de massage Tena misy mampivaro-tena ireo tovovavy mpanotra sasany
Mitombo isa hatrany ireo “salon de massage” eto amintsika, indrindra fa ny eto an-drenivohitra.
Mpianatra manana mari-pahaizana LMD Sahirana amin’ny fitadiavana asa
Tamin’ny sabotsy 7 jolay farany teo no nanao atrikasa nasionaly hanavaozana ny didim-pitondran’ny mari-pahaizana LMD ho lasa didim-panjakana ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny minisiteran’ny asam-panjakana.